एकै ठाउँबाट आमा छोरीले गु’मा’ए ज्या’न आमाको ल’डेर ज्या’न गएकै भी’रबाट छोरीको पनि ल’डे’रै ज्या’न गयाे २४ वर्षको उमेरमै ! – Sandesh Press
June 26, 2021 224
जुन भीरबाट करिब एक वर्ष अघि घाँस का’ट्ने सिलसिलामा आमाको ल’डेर ज्या’न गएको थियो सं’जो’ग त्यस्तै भयो अहिले छोरीको पनि त्यही भीरबाट ल’डे’र ज्या’न गएको छ । बागलुङ्ग जिल्लाको गल्कोट नगरपालिका वडा नं. ११ रिघाको फलाँटे भन्ने ठाउँमा एकहप्ता अगाडी बाइकसँगै भी’रबाट ख’स्दा २४ वर्षकी कुमारी नेपालीको ज्या’न गएको हो ।
ग’म्भीर घा’इते भएकी उनलाई तत्कालै भरतपुर लगीएको थियो । उपचार संभावना नभएको भन्दै घर फर्काएको केही दिनमै फेरी काठमाडौं बीर हस्पिटलमा लगिएको थियो । उनको हस्पिटलमै हिजो बिहीबार प्रा’ण गएको हो । भीरमा रहेको घुम्तीबाट करिब २०० मिटर तल खसेकी कुमारी गाउँमै बाइक सिक्ने क्रममा दु’र्घ’टनामा परेकी थिइन। उनीकी आमा पनि करिब एक वर्ष पहिले घाँस का’ट्ने’ क्रममा सोही ठाउँबाट ल’डे’की थिइन । अहिले कुमारीकाे पनि मृ’त्यु भएपछि घरमा उनका बाबा मात्रै छन् ।
करीब दुई महिनादेखि बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु सकारात्मक भएका छन् । असार १४ गते पछि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर नयाँ मोडालिटीका साथ यातायात सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल र परामर्ष शुरु गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी कल्पना घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
व्यवसाय माथि सहुलियत माग गर्दा सरकारले कुनै पनि सुनुवाई नगरेको र व्यवसाय सञ्चालनमा समेत चासो नदेखाएको भन्दै तत्काल मापदण्ड बनाएर १४ गते पछि सञ्चालन गर्न माग गरेको उहाँले बताउनुभयो । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले भने सम्वन्धित निकायहरुसँग मरामर्ष शुरु गरेको जनाउदै व्यवसाय सञ्चालनका विषयमा सकारात्मक रहेको जनाएका थिए ।
साथै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिन भन्दै व्यवसायीहरुले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविमान श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर थिए । सचिव श्रेष्ठले सीसीएमसीको बैठकमा मागपत्रसहित मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्ताव लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
व्यवसाय ठप्प हुदाँ यातायात मजदुरहरु विचल्लीमा परेको भन्दै राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग पटक पटक माग गरेको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताउनुभयो । यातायात सञ्चालनसँगै मजदुरहरुलाई खोप र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाईदा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु समेत सहयोग गर्नु पर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । व्यवसायीहरुले सरकारसँग सार्वजनिक यातायातमा बैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्नु पर्ने, सहुलियतको र राहतको व्ययवस्था गर्नु पर्ने लगायतका माग गरेका थिए । याे खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।
Prevबाढी आयो निस्कनुस् भनेर तान्नै जाँदा समेत ढोका थुनेर बसे, अन्ततः हेलम्बुको बाढीले लग्यो,टोल नै बग्यो
Nextएक वर्षीय बालकलाई ब्लड क्यान्सर, अभिभावकद्वारा सहयोगको अपील ।
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (10163)
अन्तत प्रियंकाले दिइन् छोरीलाई जन्म? (7122)
यी ८ मध्ये कुनै एक लक्षण भएकी श्रीमतीले चम्काउछिन् श्रीमानको भाग्य, तपाई पनि पर्नुभयो की ?